Basa rinoenderera mberi pasinei nekupikiswa (1-14)
Kuvaka kunoenderera mberi, vashandi vaine zvombo (15-23)
4 Sanibharati+ paakangonzwa kuti takanga tichivakazve rusvingo, akatsamwa, akagumbuka chaizvo, uye akaramba achinyomba vaJudha. 2 Akataura pamberi pehama dzake neuto reSamariya kuti: “VaJudha ava vasina simba vari kuitei? Vachazvikwanisa vari vega here? Vachapa zvibayiro here? Vachapedza nezuva rimwe chete here? Vachaita kuti matombo akatsva ari mumirwi yemarara ashandisike here?”+ 3 Tobhiya+ muAmoni+ uyo aiva akamira pedyo naye, akati: “Kunyange kana gavawo zvaro rikakwira pane zvavari kuvaka, rinoputsa rusvingo rwavo rwematombo.” 4 Inzwai, haiwa Mwari wedu, nekuti tiri kuzvidzwa,+ uye dzorerai kuzvidza kwavo pamisoro yavo,+ uye itai kuti vapambwe vaendeswe munyika yeutapwa. 5 Musafukidza kukanganisa kwavo kana kudzima chivi chavo pamberi penyu+ nekuti vakatuka vavaki. 6 Saka takaramba tichivakazve rusvingo, uye rusvingo rwacho rwese rwakabatana uye rwakavakwa kusvika pahafu yekukwirira kwarwo, uye vanhu vakaramba vakaisa mwoyo yavo pabasa racho. 7 Sanibharati, Tobhiya,+ vaArabhiya,+ vaAmoni, nevaAshdhodhi+ pavakangonzwa kuti masvingo eJerusarema ari kuenderera mberi nekugadzirwa uye kuti pakaputsika pakanga pachivharwa, vakatsamwa chaizvo. 8 Vakarangana kuti vauye kuzorwisa Jerusarema uye kuti vanyonganise zvinhu mariri. 9 Asi takanyengetera kuna Mwari wedu tikaramba takaisa varindi kuti vatidzivirire masikati neusiku. 10 Zvisinei, vanhu veJudha vaiti: “Vashandi* vaneta, uye pane murwi wematombo akawanda chaizvo; tichatadza zvachose kuvaka rusvingo.” 11 Uye vavengi vedu vakaramba vachiti: “Tichapinda pakati pavo chaipo vasingazvizivi uye vasingationi, uye tichavauraya tomisa basa racho.” 12 Pese paiuya vaJudha vaigara pedyo navo, vairamba vachingotiudza* kuti: “Vachauya kwatiri vachibva kumativi ese.” 13 Saka ndakaramba ndakaisa vanhu munzvimbo dzakanyanya kudzikira museri merusvingo, munzvimbo dzisina chinhu, uye ndakavaisa maererano nemhuri dzavo vaine mapakatwa avo, mapfumo avo, neuta hwavo. 14 Pandakaona kuti vaitya, ndakabva ndangosimuka ndikati kuvakuru vakuru+ nevatevedzeri vevatongi nevamwe vanhu vese: “Musavatya.+ Yeukai Jehovha, iye mukuru uye anoshamisa;+ uye rwirai hama dzenyu, vanakomana venyu nevanasikana venyu, madzimai enyu nemisha yenyu.” 15 Pashure pekunge vavengi vedu vanzwa kuti takanga tava kuziva zvavaiita uye kuti Mwari wechokwadi akanga avhiringidza zvavaironga, tese takadzokera kunoita basa parusvingo. 16 Kubva pazuva iroro, hafu yevarume vangu ndiyo yaiita basa+ imwe hafu yavo yakabata mapfumo, nhoo, uta, nenguo dzesimbi. Uye machinda+ aimira kumashure kweimba yese yaJudha 17 yaivaka rusvingo. Vaya vaitakura zvinorema vaiita basa racho neruoko rumwe chete, rumwe rwacho rwakabata chombo.* 18 Muvaki mumwe nemumwe aiva nebakatwa rake muhudyu, uku achivaka, uye munhu aifanira kuzoridza hwamanda+ aiva akamira pedyo neni. 19 Ndakabva ndati kuvakuru vakuru nevatevedzeri vevatongi nevamwe vanhu vese: “Basa iguru uye pari kuda kushandwa pakakura, uye isu takatarangana parusvingo, tiri kure nekure. 20 Pamunonzwa kurira kwehwamanda, unganai kwatiri. Mwari wedu achatirwira.”+ 21 Saka takaramba tichishanda, imwe hafu yakabata mapfumo, kubva pakutsvuka kweutonga kusvika nyeredzi dzabuda. 22 Panguva iyoyo ndakati kuvanhu: “Varume ngavave muJerusarema usiku, mumwe nemumwe nemushandi wake, uye vachatirinda usiku voshanda masikati.” 23 Saka ini nehama dzangu, vashandi vangu,+ nevarindi vainditevera, hatina kumbobvisa nguo dzedu, uye mumwe nemumwe wedu akaramba aine chombo chake muruoko rwake rwerudyi.
^ Kana kuti “Vanotakura zvinorema.”
^ ChiHeb., “vaitiudza kagumi.”
^ Kana kuti “chombo chinoita zvekukandwa.”